Reer galbeedka oo ka gaabsaday u hambalyaynta madaxweyne Putin | Arrimaha Bulshada
Home News Reer galbeedka oo ka gaabsaday u hambalyaynta madaxweyne Putin
Reer galbeedka oo ka gaabsaday u hambalyaynta madaxweyne Putin
Bulsha:- Hoggaamiyayaasha caalamka ayaa hambalyo u diray madaxweyne Vladimir Putin oo mar kale loo doortay xilka madaxtinnimada, balse madaxda reer galbeedka ay si gaabis ah uga jawaabceliyay guusha Puti
Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping oo Putin u hambalyeeyay ayaa sheegay in xiriirka dalkiisa ee Ruushka uu gaaray halkii ugu fiicnaa taariikhda.
Ra'iisalwasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa u hambalyeeyay Putin. Hogmaaiyaha Jarmalka Chancellor Angela Merkel ayaa lagu wadaa inay Putin u dirto hamblayo.
Mr Putin ayaa helay in ka badan 76% codadka la dhiibtay.
Hogaamiyahii Mucaaradka ee ugu cadcaddaa doorashada Alexei Navalny ayaa laga mamnuucay in uu doorashada ka qeybqaato
Wuxuu isbadel ku sameyn doonaa qaab dhismeedka dowladiisa sida xafiiska ra'iisalwasaaraha.
Hoggaamiyayaasha dalalka Iran, Kazakhstan, Belarus, Venezuela, Bolivia iyo Cuba ayaa ka mid ahaa dalalkii u hambleeyay Putin.
Khudbadda guusha oo uu ka jeediyay magaaladda Moscow ayaa waxa uu Putin sheegay in natiijada doorashada uu u arko in ay tahay kalsooni la siiyay waxqabadkiisa.
Madaxwayne Putin ayaa waxba kama jiran ku tilmaamay su'aalaha ku saabsan in uu xilka hayni doono inta cumrigiisa ka dhiman.
Mr Vladimir Putin ayaa dalka Ruushka ka talinayay tan iyo sanadii 1999 oo uu mar ahaa rai'sul wasaare.
Madaxwayne Putin ayaa waxaa doorashadan kula loolamaysa 7 musharax oo kale.